काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वितरण गरेको आभूषणप्रति आपत्ति जनाएका छन् । संविधान दिवसका अवसरमा एमालेले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘आज श्रीमती, बाउको मुख हेर्ने दिन हो ? कस्तो लालसा ? कस्तो अतृप्ति ? लजाइरहेका छन् ती मानपदवीहरु, कस्तो खालको झुण्डिनुपर्ने भयो भनेर। बोल्न सक्ने भए उफ्रिन्थे ती,’ उनले भने।
संविधान बनाउने क्रममा स्वार्थ समूहहरू तानातान भएको भएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘विभिन्न देशका संविधानसँग तुलनात्मक अध्ययन भए । विगतका अनुभवलाई ध्यानमा राखेर नेपालको संविधान निर्माण गर्यौ । यद्यपि, त्यसक्रममा स्वार्थ समूहहरु तानातान भए । आफ्ना अधिकार हितलाई सुनिश्चित गर्नु स्वभाविक भए । विभिन्न शक्तिका दबाब झेलेर पराजित गरेर संविधान जारी गर्‍यौँ ।’